Isihlomelo esiziqulathileyo esingenasiphelo
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguKathryn
Isihlomelo sethu esinemigangatho emibini esinemigangatho emibini siza siphelele nekhitshi, indawo yokuhlala, igumbi elimanzi, igumbi legadi, i50inch yescreen esisicaba sikamabonakude kunye nendawo yokupaka. Beka kwilali entle yaseWhite Roding, le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kwaye sikumizuzu nje eyi-15 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseStansted.
Iindwendwe ziya kuba nokufikelela kuzo zonke izixhobo ezikwisihlomelo (kubandakanya umpheki, umatshini wokuhlamba izitya, ifriji, umatshini wokuhlamba/umatshini wokomisa, i-oveni yemicrowave.) Kukho i-wifi yasimahla efumanekayo kunye neNetflix. Sikwabonelela iindwendwe zethu ngeendawo zokupaka ezincomekayo. Sifuna ukuba uzive usekhaya ke ukuba unezicelo ezikhethekileyo, sazise kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuba yenzeke.
I-White Roding ithandekayo, ilali enobuhlobo. Zininzi iindawo zokuhamba zelizwe, iklabhu yezemidlalo kunye nentlalontle, ivenkile yasefama enendawo yokutyela encinci apho unokufumana isidlo sakusasa esibalaseleyo kunye nesidlo sasemini, iziko legadi, ivenkile yezipho nokunye. Indawo yayo igqibelele njengoko ikufutshane needolophu ezininzi, isikhululo seenqwelomoya saseStansted njl. Ikwakufuphi nenani leendawo zomtshato-iHolo yaseColville ngokukodwa-ingaba yindawo efanelekileyo yokuhlala ukuba uya emtshatweni kule ndawo.
Sijonge ukudibana nawe ukuze sikubonise ngokujikeleza isihlomelo ekufikeni kwakho kwaye sikunike isitshixo sakho, kwaye ke sinethemba lokukubona kwakhona xa uphuma. Ukuba asikwazi ukubakho xa ufika, siya kukwazisa ukuba ungafikelela njani kwisihlomelo. Nangona siya kubuhlonipha ubumfihlo bakho, sihlala kufutshane ne-annexe, ngoko ke siya kukuvuyela ukukunceda xa ufuna nantoni na.
Sijonge ukudibana nawe ukuze sikubonise ngokujikeleza isihlomelo ekufikeni kwakho kwaye sikunike isitshixo sakho, kwaye ke sinethemba lokukubona kwakhona xa uphuma. Ukuba asikwazi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- White Roding